Gardaramar 03.09.2021 03.09.2021
ERAYO JACEYL AH OO AY ISU DIRI KARAAN LAMAANAHA IS JECEL
Aqriso: Erayo Jaceyl Oo Aad Umacaan Badan Markad Qof Kutiraahdana Aad Usoo Jiidanaya
Erayo Aad U Macaan udir lamaankaga
Cid kale ma khusayso mar kasta oo aan indhahaaga eego. Waxaan la yaabanahay haddii aad ogtahay sida aad gaarka u tahay; Waxaan la yaabanahay haddii aad ogtahay sida qaaliga kuu ah; Waxaan la yaabanahay haddii aad ogtahay sida nasiibkeyga ah inaan kuu ahaado kuwayga; Aad baan kuu jecelahay.
Inaan ku jeclahay sannadahan oo dhan waa hawo iga dhigaysa neefsashadayda iyo cadarka naftayda ka dhigaysa mid qurux badan! Haddaad riyo tahay, weligay ma rabo inaan tooso. Ma xasuusan karo waxa u eg inaan ku jeclaan. Kaliya kaligey ma aanan raadineynin jacayl. Aniguba waan ku raadinayey.
Maalmahayaga oo dhammi adigay kuu sixran yihiin. Haddii aan qof ka soo qaadan karo dhulkan, weli waan ku soo qaadan lahaa. Marnaba ma hilmaami doono maalinta qudha ee aan jacaylka ku dhacno. Weligaa hoosta ka xariiqin awoodda jacaylka dhabta ah.
Waad la yaabaysaa, yaabaysaa oo i farxad gelisaa maalin kasta. Waxaad tahay isha kaliya ee ugu weyn farxadayda oo dhan. Waxaad tahay qorraxda noloshayda oo waan ku meertadayaa, waad i nafaqaysaa, waxaad i siisaa nolol.
Xitaa saynisku ma sharxi karo waxa aan adiga adiga kaa dareemayo. Jacaylku waa sida moolka oo kale cirka cas iyada oo hadhkeeda ku duuban badweynta hoosteeda. Jacaylkeennu waa sida cirifka oo kale in la kulmo midba midka kale welina ku duuban yahay maalin iyo baxay!
Miyaad ogtahay sababta boosaska farta noogu jiraan? Taasi waa sababta oo ah, tayda, farahaaga ayaa si fiican u habboon. Waad ka dhici kartaa buur dheer, waad ka dhici kartaa geed dheer, laakiin sida ugu fiican ee aad u dhici karto waa inaad si qoto dheer u jeclaato aniga.
Waxaan jeclaan lahaa inaan la joogo qof aniga iga jecel aniga. Qalbigayga waa meel adiga kaliya laguu hayo. Waqti kasta oo ay tahay inaan sugo, waxaan ku sugi doonaa anigoo dhoola cadeynaya. Ha igu qaldin; Waan ogahay in dareenadani aysan waari doonin. Laakiin hadda waa inaan noqdaa mid daacad ah; waad tahay dhamaantiin waxaan ka fakarayaa. Laga yaabee haddii aan dhag u dhigno waxa qalbiyadeenna ka dhahayaan, laga yaabee inaan adduunka ka wada guuleysanno.
Waxaa macquul ah inaan ka tashan karno aayaheena. Waxaan jeclaan lahaa inaan kuu sheego erayadan markaad ila joogto. Qalbigaygu wuxuu u baahan yahay tilmaamo si uu qalbigaaga u gaadho. Miyaad garaneysaa wadada ugu fiican? Macaanto, waan ku jeclahay; aan keydino waxa aan heysano maxaa yeelay dad badan noloshooda oo dhan ma awoodaan inay dhisaan xiriir noocan oo kale ah.
Weligey kuma fikirin in seddex erey noloshayda gebi ahaanba beddeli doonaan. Waan ku jeclahay adiga waxaanan diyaar u ahay inaan ka qayliyo dhammaantood! Gacaliye, waan ku jeclahay; aan ilaashano waxa aan heysano maxaa yeelay dad badan noloshooda oo dhan ma awoodaan inay dhisaan xiriir wanaagsan. Ma ogtahay cidda sida dhabta ah kuu jecel? Qofka, oo adiga kugu barya Ilaah adiga oo qarsoodi ah. Aad baan kuu jeclahay. Gugaani wuxuu dhaxli doonaa dhammaan ammaanta jacaylkeenna, oo waxaan noqon doonnaa qoys is jecel!
Markaan si qoto dheer indhahaaga u fiiriyo, iyaga dhexdooda waxaan ku arkaa qofka aan doonayo inaan noqdo, waan ku jeclahay. Waxa kaliya ee runta ah ee adduunyadu waa jacaylkeenna, waxay igu dareensiisay inaan noolahay.
Waan ku jeclahay, cunug. Waxaan ku dhaaranayaa inaanan ku dhaawicin, waxaan leenahay hal qalbi oo labo ah inta aan is jecel nahayna way garaacdaa, waan ku jeclahay. Waxaan rabaa inaan aad idiinku soo dhawaado oo aan dareemo sida qalbiyadeennu ugu garaaci doonaan wada noolaanshaha; Waan ku jeclahay gacaliso Waxaan kugu jeclaaday anigoo og in ay jiri doonaan waqtiyo farxad saafi ah iyo daqiiqado yar oo dhibaato ah.
Kaa xiisay waa waxa igu dhibaya waxaanan ka baryayaa inaad soo afjari karto. Kama xumahay inaad waxoogaa maqnaato; Waan ka xumahay inaanan tan u diyaar garoobin. Waxaan u maleynayay inay fududaan doonto, laakiin waxa kaliya ee aan ka fikirayaa waa inaan markale ku dhunkado.
In kasta oo xanuunkani yahay mid aan loo dulqaadan karin, haddana ma quusanayo. Waxaan sugi doonaa samir maalinta aan markale kula joogi doono. Marka, haye, jaceylkeyga. Weligaa ha sii deyn. Fadlan ogow inaan ku jeclaan doono xitaa markay maalmuhu ifaan. Tani maahan wax ku meel gaar ah Halkan uma joogo inaan tijaabiyo biyaha. Waxaan halkaan u imid in la igu shubo, mana daneeyo haddii aan hafto. Markaad bilowdo inaad naftaada gaalowdo, iga fikir. Ogow inuu waligiis jiri doono qof adiga kugu aaminta gebi ahaanba.
Kaliya fiiri dhinacaaga waadna i heli doontaa Kuwa aadan iloobi karin waa kuwa noloshaada saameyn weyn ku yeeshay. Adiga ayay ii ahayd aniga. Had iyo jeer adiga ayaa ahaa. Waxay rabaan inaan ka hadlo xanuunka, adigana waan kaa fikiray. Jacaylku wuxuu noqon karaa mid xanuun badan. Xusuustu waa mid naxariis daran. Mararka qaar waxaan isweydiiyaa jacaylku ma mudan yahay in loo dagaallamo, laakiin markaa waxaan xusuustaa wejigaaga oo dagaal ayaan diyaar u ahay.
Markaan indhaha xidho, waan ku arkaa. Markaan indhaha kala qaado, waan ku arkaa. Daqiiqad ma dhaafi karto adiga oo aan kaa fekerin. Waan ku jeclahay in ka badan inta ereydu qeexi karaan, dareenku wuu cabirayaa fikirkuna wuu qiyaasi karaa. I tus habeen wanaagsan, waxaana kuu sheegayaa maalin si wanaagsan ku dhammaatay. Waxaad had iyo jeer ka dhigeysaa maalintayda.
Habeen wanaagsan farxaddayda. Jaceylka aan kuu qabo waa sii kordhayaa ilbidhiqsi kasta. Subaxdii, galabtii, ama habeenkii, jacaylka aan kuu qabo waligiis waa mid super, xusuusin ah!
Maalin weyn ka hor farxaddayda. Waan kuu xiisay tillaabo kasta oo aan qaado iyo dhaq-dhaqaaq kasta oo aan sameeyo. Aad baan kuugu xiisay waxaanan jeclaan lahaa inaad fahanto.
Wax fikrad ah kama lihid xaddiga farxadda aad noloshayda u soo qaadatay. Weli waxaad tahay bisad yar oo indhahayga eegaysa, jacayl doonaysa adduunyadan qabow. Waxaan joojiyaa werwerka aan ka qabo berrito markii aan arkay sida ay u fiicnayd shalayto iyo sida sharafta leh ee maanta ay kula muuqato. Waa jacaylkaaga oo dhan!
Waxaad tahay cawskayga markay qorraxdu ifto, Xiddigahayga habeennimo markii gudcurku dhawaaqo. Waad hubtaa inaan wada ahay dhammaantiis. Habeen wanaagsan my love. Hadaad ku dhiiratid, gacanta i qabso oo ii qaado meesha qalbigaagu yaal. Waxaan rabaa inaan dareemo waxa ay u egtahay inaad jeclaato qof adiga oo kale ah. Wax kasta oo aad qabato waa ii farxad.
Marnaba ma murugoon karo mar kasta oo aan agagaarkaaga joogo. Waxaan fadhiyaa halkan maalintii oo dhan anigoo sugaya daqiiqada aan arki doono wajigaaga, waxaana laga yaabaa inaan helo laabta.
Aad ayaan uga xumahay in dhammaantood ku dhammaadeen riyo maalmeed. Wax ka xanuun badan majiraan adiga mooyee. Laakiin maxaan sameyn karaa? Waxaad horey u go'aansatay inaan loogu talagalin.
Illoobiddu waa ku adag tahay. Kaliya markii aad u maleyneyso inaad fiicantahay, xusuus lama filaan ah ayaa xanuunka dib u soo celinaysa. Markaan ku eego adiga, waxaan gartay intaad noloshayda qayb ka ahayd. Sida gaarka kuu ah iyo sida aad had iyo jeer ii farxad geliso. Waan ku jeclahay. Weligaa ha iga tagin, gacmahayga si adag u qabo. Adiga la'aantii noloshayda, wax walba waa macno la'aan.
Teleefanka aan message-ka kaaga soo diro xili walbo wuxuu u baahanyahay inaan magacaga ku qoro oo aan kuusoo diro, sida dhulka ugu baahanyahay roob teleefoonkana ugu baahanyahay jaajar ayuu jaceylkeenana ugu baahanyahay waraabin joogto ah. Waxaa inoo dhaxeeyo badweyn, buuro, iyo bari aad u dheer, anigu maahi dabeyl lakin hal sikin isii waxaan kuusoo dirayaa jaceylkeyga, oo aan soo gooynayaa inta dhul ee noo dhaxeyso, waanba kuusoo diray maheshay xabiibi. Marna ma arki kartid sida aan kuugu xiisay, marna ma ogaan kartid sida aan kaaga taxadaro, marna madareemi kartid sidaan kuu jeclahay, waxyaabahaas dhan si aad u ogaato wadnaheyga ayey ku dhexjiraan makuu dilaaciyaa si aad u ogaato wax walbo.
Hadii aan ku dhaho waan fiicanahay beri waxaa dhici karto inaan ku dhaho mafiicni hadii aan kulano waxaa ku xigto inaan hadane kala tagno, lakin waxaa mar waliba aan ku dhihi karaa waan kuuxiisay, maxaa yeelay si joogto ah aan is badal laheyn ayaan kuugu xiisaaa. Jaceylku Iyo dabeyshu waa isku mid waa labo sheey oo jirku dareemo, balse maahan shey gacanta lagu qaban karo, ama la taaban karo. Mar Weliba aad Fariin iisoo dirto waxaan ku xafidaaa qalbigeyga, mar waliba aad i eegto waxaan ku keydiyaaa xusuusteyda, Eray walbo aad i tidhaado waxaan u gudbiyaaa maskaxda, adiga iyo ficiladaada waa kuwo ku weyn nolosheyda.
Dhagteyda Si xan ah uguma aadan odhan waan ku jeclahay, waayo erayadaasi waxey si toos ah ugu dhaceyn qalbigeyga waxeyna horay u dumiyeen ama u jejebsheen dhamaan darbiyadii ku xeernaa qalbiga, waxaad furatay wadooyin adigoo dhan walbo ka geli karo qalbigeyga. Weligaa ha diidin qof noloshaada kusoo biiray adigoo xadkiisa siinayo, maxaa yeelay qofka wanaagsan wuxuu nasiiyaaa farxad, qofka xuna waxaan kala kulanaa inaan ku cibro qaadano, oo aqoon baa nooga saaideyso, weligaa cidna ha iskala weeynaaan.
Xabiibi Xusuusnoow labo sirood ayaa jaceylka lagu kobciyaaa, markii aad Qaldantahay qiro, markii aad saxantahayna iska aamus, waayo aamusnaantaada waxa dareemo qalbigeeyga, oo si toos ah ugu xiran qalbigaaga. Dhibicda roobka ah markii aad ku eegto indhahaada waxaad moodaa ineey aad u yaryihiin, balse ubax sugayo oo u oomanaa dhibicdaas roobka ah ubaxaasi waxey ka dhigtaa mid dhal dhalaalayo, fariinta aad iisoo dirtay waa dhowr xaraf oo kooban balse waa xarfo ku weyn nolosheyda Jaceylku maahan sidaad u hilmaanto ee waa sidaad u cafiso,mana ahan sidaad u maqasho ee waa sidaad u fahanto dhawaaqa wadnahaaga,islamarkaana aad u dareento ahmiyada uu qofkaas kale xagaaga ka leeyahay,mana awoodid inuu qofkaas kaa tago waxa ay kugu qaadataba.
Keliya qalbiyo yar ayaa si fudud u cadeyn kara daacadnimada jaceylka dhabta ah,dadka qaar waxey kugu qaldaan xoogaa dhoolacadeyn ah iyo illin been abuur ah,Ha u ogolaan naftaada in dibindaabyadaas laguu dhigo. Dadka qaar waxa ay yiraahdaan wa ay adag tahay in la xusuusto,waana kugu adkaataa inaad cafiso,ha hilmaamin inaad iga cafiso qaladaadka yar yar,hana ilaawin waligaa balantii dhexdeena.
Gacaliye, waan ku jeclahay; aan ilaashano waxa aan heysano maxaa yeelay dad badan noloshooda oo dhan ma awoodaan inay dhisaan xiriir wanaagsan. Ma ogtahay cidda sida dhabta ah kuu jecel? Qofka, oo adiga kugu barya Ilaah adiga oo qarsoodi ah. Aad baan kuu jeclahay. Gugaani wuxuu dhaxli doonaa dhammaan ammaanta jacaylkeenna, oo waxaan noqon doonnaa qoys is jecel!
Markaan si qoto dheer indhahaaga u fiiriyo, iyaga dhexdooda waxaan ku arkaa qofka aan doonayo inaan noqdo, waan ku jeclahay. Waxa kaliya ee runta ah ee adduunyadu waa jacaylkeenna, waxay igu dareensiisay inaan noolahay. Waan ku jeclahay, cunug.
Waxaan ku dhaaranayaa inaanan ku dhaawicin, waxaan leenahay hal qalbi oo labo ah inta aan is jecel nahayna way garaacdaa, waan ku jeclahay. Waxaan rabaa inaan aad idiinku soo dhawaado oo aan dareemo sida qalbiyadeennu ugu garaaci doonaan wada noolaanshaha; Waan ku jeclahay gacaliso Waxaan kugu jeclaaday anigoo og in ay jiri doonaan waqtiyo farxad saafi ah iyo daqiiqado yar oo dhibaato ah. Kaa xiisay waa waxa igu dhibaya waxaanan ka baryayaa inaad soo afjari karto.
Kama xumahay inaad waxoogaa maqnaato; Waan ka xumahay inaanan tan u diyaar garoobin. Waxaan u maleynayay inay fududaan doonto, laakiin waxa kaliya ee aan ka fikirayaa waa inaan markale ku dhunkado.
In kasta oo xanuunkani yahay mid aan loo dulqaadan karin, haddana ma quusanayo. Waxaan sugi doonaa samir maalinta aan markale kula joogi doono. Marka, haye, jaceylkeyga. Weligaa ha sii deyn. Fadlan ogow inaan ku jeclaan doono xitaa markay maalmuhu ifaan. Tani maahan wax ku meel gaar ah Halkan uma joogo inaan tijaabiyo biyaha.
Waxaan halkaan u imid in la igu shubo, mana daneeyo haddii aan hafto. Markaad bilowdo inaad naftaada gaalowdo, iga fikir. Ogow inuu waligiis jiri doono qof adiga kugu aaminta gebi ahaanba. Kaliya fiiri dhinacaaga waadna i heli doontaa Kuwa aadan iloobi karin waa kuwa noloshaada saameyn weyn ku yeeshay. Adiga ayay ii ahayd aniga.
Had iyo jeer adiga ayaa ahaa. Waxay rabaan inaan ka hadlo xanuunka, adigana waan kaa fikiray. Jacaylku wuxuu noqon karaa mid xanuun badan. Xusuustu waa mid naxariis daran. Mararka qaar waxaan isweydiiyaa jacaylku ma mudan yahay in loo dagaallamo, laakiin markaa waxaan xusuustaa wejigaaga oo dagaal ayaan diyaar u ahay. Markaan indhaha xidho, waan ku arkaa.
Markaan indhaha kala qaado, waan ku arkaa. Daqiiqad ma dhaafi karto adiga oo aan kaa fekerin. Waan ku jeclahay in ka badan inta ereydu qeexi karaan, dareenku wuu cabirayaa fikirkuna wuu qiyaasi karaa.
I tus habeen wanaagsan, waxaana kuu sheegayaa maalin si wanaagsan ku dhammaatay. Waxaad had iyo jeer ka dhigeysaa maalintayda. Habeen wanaagsan farxaddayda. Jaceylka aan kuu qabo waa sii kordhayaa ilbidhiqsi kasta. Subaxdii, galabtii, ama habeenkii, jacaylka aan kuu qabo waligiis waa mid super, xusuusin ah! Maalin weyn ka hor farxaddayda. Waan kuu xiisay tillaabo kasta oo aan qaado iyo dhaq-dhaqaaq kasta oo aan sameeyo. Aad baan kuugu xiisay waxaanan jeclaan lahaa inaad fahanto.
Wax fikrad ah kama lihid xaddiga farxadda aad noloshayda u soo qaadatay.
Weli waxaad tahay bisad yar oo indhahayga eegaysa, jacayl doonaysa adduunyadan qabow. Waxaan joojiyaa werwerka aan ka qabo berrito markii aan arkay sida ay u fiicnayd shalayto iyo sida sharafta leh ee maanta ay kula muuqato. Waa jacaylkaaga oo dhan! Waxaad tahay cawskayga markay qorraxdu ifto, Xiddigahayga habeennimo markii gudcurku dhawaaqo.
Waad hubtaa inaan wada ahay dhammaantiis. Habeen wanaagsan my love. Hadaad ku dhiiratid, gacanta i qabso oo ii qaado meesha qalbigaagu yaal. Waxaan rabaa inaan dareemo waxa ay u egtahay inaad jeclaato qof adiga oo kale ah.
Wax kasta oo aad qabato waa ii farxad. Marnaba ma murugoon karo mar kasta oo aan agagaarkaaga joogo. Waxaan fadhiyaa halkan maalintii oo dhan anigoo sugaya daqiiqada aan arki doono wajigaaga, waxaana laga yaabaa inaan helo laabta. Aad ayaan uga xumahay in dhammaantood ku dhammaadeen riyo maalmeed. Wax ka xanuun badan majiraan adiga mooyee.
Laakiin maxaan sameyn karaa? Waxaad horey u go'aansatay inaan loogu talagalin. Illoobiddu waa ku adag tahay. Kaliya markii aad u maleyneyso inaad fiicantahay, xusuus lama filaan ah ayaa xanuunka dib u soo celinaysa.
Markaan ku eego adiga, waxaan gartay intaad noloshayda qayb ka ahayd. Sida gaarka kuu ah iyo sida aad had iyo jeer ii farxad geliso. Waan ku jeclahay. Weligaa ha iga tagin, gacmahayga si adag u qabo. Adiga la'aantii noloshayda, wax walba waa macno la'aan. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan haysto qof kula mid ah, waxaad tahay hanti run ah.
Xitaa hadii aan si kasto isku dagaalno waxaa kuu baahan nafta oo aad dawo iyo dugsi u tahay. Ma ogtahay nafteydaay in holaca qalbigeyga ka shidan qofka keliya ee demin kara aad adigu tahay, Mase la socotaa in codkaagu uu ii furo sameecadaha maqalka dhagaheyga. Maalin ayaa i dhaaftay anigoo aanan dheehaneyn dhoolaceyntaadii quruxda badneynd ee waaberi kasto aan ku indha doogsan jiray.
Waa dareen xanuun badan Macaan inaad ku fekerto in qofkii aad aadka u jecleyd aad ka tagto adigoo farxad ka heli kara. Qalbi wadnaheyga adiga ayaan ku siiyey, maadaama adiga uu kuu garaacmayo ma awoodo inaan xakameeyo xittaa hal daqiiqo in aan codkaaga waayo, daqiiqadi aan codkaaga maqlo farxada iyo yididiilo ayaa hareysa qalbigan kuu ooman ee adigu aad hogaanka u heyso.
Mobileye eyeq5 spec
Lesen for a2
thoughts on “Erayo macaan qoraal ah”
09.09.2021 at 15:12
Naruto mod terraria
Jennifer newstead wiki
Dagrel on Erayo macaan qoraal ah